फलित ज्योतिष : फगत झूट - Jhilko
फलित ज्योतिष : फगत झूट
ज्योतिष, जादू–टुनाको मामलामा भारत र नेपालमात्र होइन, संसारै पीडित छ । यसबाट फ्रान्सजस्तो विकसित देश पनि निक्कै लपेटिएको छ । फ्रान्सका पन्ध्रौं शताब्दीका नास्त्रादमश त भविष्यवक्ताको रुपमा हालसम्म संसारभरि नै प्रसिद्ध छन् । नास्त्रादमशको भविष्यवाणी त्यो बेलादेखि हालका दिनसम्म ठ्याक्ठ्याकी मिलिरहेको दाबी गरिन्छ । तर त्यसमा लेखिएको भाषा यति गोलमटोल छ कि एउटै शब्दका अनेकौं अर्थ लगाउन सकिन्छ । त्यसमा ठोस रुपमा यही नै हो भनेर दाबी गर्न सकिने कुनै आधार फेला पर्दैन ।
त्यसो त ज्योतिषले बोल्ने–लेख्ने भाषा नै प्रायः गोलमटोल नै हुन्छ । यदि कुनै चतुर ज्योतिषलाई कसैले आफ्नो जन्मिने बच्चा छोरा हुन्छ कि छोरी भनेर सोधेमा उसले दिने जवाफ ‘पुत्रो न पुत्री’ भन्ने खालको हुन्छ । यसको अर्थ जसरी पनि लगाउन सकिन्छ– पुत्र, पुत्री होइन भन्ने हुन्छ भने पुत्र होइन, पुत्री भन्ने पनि हुन्छ । न पुत्र न पुत्री, बीचको लिङ्ग भन्ने पनि लगाउन सकिन्छ ।
ज्योतिषको कपोलकल्पित भविष्यवाणीका कारण कयौं मान्छेको घरपरिवार बिग्रिएको छ भने कयौंको अकालमै ज्यान समेत गएको छ भने ज्योतिष आफैको पनि ज्यान गएका उदाहरण समेत छन् । यसै प्रसङ्गमा ओशोले एक फ्रान्सेली ज्योतिषबारे आफ्नो प्रवचनमा उल्लेख गरेका छन् । ओशो भन्छन्– फ्रान्समा एक प्रख्यात ज्योतिष थिए । उनले धेरैको भविष्यवाणी गरे । धेरैजसो मिलाए ।
एक दिन चुनौतीबस् उनले आफ्नैबारे भविष्यवाणी गरे । उनले आफ्नो मृत्यु हुने तिथि, मिति र समय तोके । उनले तोकेको समयमा अनुसन्धानकर्ताहरु वरिपरि भेला भए । उनले तोकेको समयमा जब घडीको सुई ठ्याक्कै पुग्यो, त्यसै बखत उनले त्यस बिल्डिङको सातौं तलाबाट फाल हानेर आत्महत्या गरे ।
ज्योतिषीका कारण आत्महत्या गरेका थुप्रै कारण हुन सक्छन् । त्यसमध्ये भारतमा भएको एउटा आत्महत्याको समाचार पनि उल्लेखनीय हुन्छ । २१ जुन, १९५५ मा भारतको हिन्दीभाषी अखबार ‘हिन्दूस्तान’को मुख्यपृष्ठमा एउटा समाचार प्रकाशित भयो । हेडलाइन थियो ‘परिवार के कातिल मदनमोहनलाल द्वारा आत्महत्या ः दुखांत नाटक की जड ज्योतिषीकी भविष्यवाणी’ अर्थात् परिवारै हत्या गर्ने मदनमोहनलालद्वारा आत्महत्या : दुखान्त नाटकको कारण ज्योतिषीको भविष्यवाणी । समाचार अनुसार त्यस व्यक्तिलाई कुनै ज्योतिषले उसले ३० जुन पहिले नै अवश्यमेव आत्महत्या गर्नेछ ।
फलित ज्योतिषमा अत्यधिक विश्वास गर्ने व्यक्ति भएका कारण ज्योतिषको उक्त भनाइले उसको दिमागमा घर बनाएर बस्यो । त्यसकारण उसले आफ्नो परिवारको हत्या ग¥यो ता कि परलोकमा आफू पुग्नेबित्तिकै उसले आफ्नो परिवार पाउन सकोस् । परिवारको हत्या गरिसकेपछि उसले २० तारिख गाजियावादको नजिक करिब १२ किलोमिटर टाढा साहिबावाद स्टेशन नजिकै दौडिरहेको रेलको लीगमा बसेर आत्महत्या गर्यो ।
अनुसन्धानमा एक फर्जी चेक काण्डमा मदनमोहनलालसहित ज्योतिष पनि संलग्न रहेको पाइयो । जसको भेद नखुलोस् भनी ज्योतिषले उसलाई आत्महत्या गर्न उक्साएको देखियो । उक्त ज्योतिषलाई के–कति कानुनी कार्वाही भयो, त्यसबारे जानकारी पाइएको छैन । तर ज्योतिषको मामलामा भारतभन्दा नेपाल सरकार चाहिं केही प्रगतिशील देखिन्छ । हालै मात्र भूकम्पको भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिषलाई प्रहरीले खोरमा हालेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । ज्योतिषीय भविष्यवाणीका कारण कति मान्छेको घरबार चौपट भयो त्यसको लेखाजोखा भएको र कार्वाही भएको हत्तपत्त कुरा बाहिरिंदैन । यसैबीच एक प्रख्यात ज्योतिषले केही पहिले ‘शुभलाभ’ नामक नेपाली चलचित्र बनाएका थिए । फिल्म नराम्ररी ‘फ्लप’ खायो । सबैको भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिषको आफ्नै फिल्म गुल्टिएपछि फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा उनलाई निक्कै मजाले मजाक बनाइयो ।
प्राचीन भारतमा ज्योतिष
नेपालका ज्योतिषीका विषयमा कुरा गर्दा भारतको कुरा नगरी जरासम्म पुग्न सकिन्न । प्राचीन भारतमा ज्योतिष शब्द ज्योतिर्विज्ञान अर्थात् खगोलशास्त्रको पर्याय थियो । त्यसबेला जसले ग्रहनक्षत्र र ग्रहको अध्ययन गथ्र्यो उसलाई खगोलशास्त्री वा ज्योतिर्विद भनिन्थ्यो भनी ‘कितना अवैज्ञानिक है ज्योतिष’ पुस्तकका सम्पादक राकेश नाथले लेखेका छन् । उनी भन्छन्– आधुनिक काल आउञ्जेलसम्ममा भारतले ज्योतिष विज्ञानमा थुप्रै प्रगति गर्न सक्थ्यो । खगोल विज्ञानको उन्नति हुनुको अर्थ थियो भौतिक ज्ञानको विस्तार हुनु र ग्रह–ताराको कुरा फलाकेर अन्धविश्वास फैलाएर उदरपूर्ति गर्नेहरुमाथि सीधै धावा ।
धन्धा एकातिर, सत्य एकातिर हुनु त स्वाभाविक हो । त्यसैले काल्पनिक लोक–परलोकको नाममा व्यापार गर्ने पण्डित, पुरोहित र तथाकथित भविष्यवेत्ता ज्योतिषहरुले बढ्दो खगोलशास्त्रको खतरा पहिले नै अनुमान गर्न थाले । त्यसैले खगोलशास्त्रमा ज्योतिष घुसाएर ज्योतिषविज्ञान भन्न थाले ।
ज्योतिषहरुले प्राचीनकालदेखि हालसम्म पनि वेदको नाममा आफ्नो दोकानदारी राम्रैसँग चलाएका थिए÷छन् । वेदमा लेखिएको छ, पृथ्वी स्थिर छ, सूर्य देवता पृथ्वीको चक्कर लगाउँछन् ।
(क) यः पृथिवीं व्यथमानमदृंहद् स जनास इंद्रः । (ऋग्वेद २/१२/१) अर्थात् हे मनुष्य, इन्द्रले सृष्टिको आरम्भमा कामिरहेको पृथ्वीलाई स्थिर गरे ।
(ख) विश्वरूपां ध्रुवां भूमिं पृथिवीमिंद्रगुप्ताम् । (अथर्ववेद १२/१/११) अर्थात् अनेक रूप भएको अचला (अस्थिर) पृथ्वीलाई इन्द्रले रक्षा गर्छन् ।
(ग) ध्रुवां भूमिं पृथ्वी धर्मणा धृतां...चरेम..विश्वहा । (अथर्ववेद १२/१/१७) अर्थात् यस अचल भूमिलाई धर्मले धारण गरेको छ, जसमा हामी विचरण गर्दैछौं ।
वेदलाई देववाणी मान्ने पण्डित–पुरोहितलाई चुनौति दिँदै आर्य भट्टले पाँचौं शताब्दीमै खण्डन गरे । उनले भने, ‘प्राणनैति कलां भूः (आर्यभटीयम्, आर्या ४) अर्थात् पृथ्वी प्राण नामक काल परिणाम (पलको षष्ठांश)मा एक कलामा चल्ने गर्छ ।
यति भनेपछि वेदलाई नै पत्थरको लकिर मान्नेहरुमा ठूलो हलचली पैदा भयो । त्यसपछि आर्य भट्टलाई झुटो सावित गर्न आक्रामक प्रयास सुरु भयो । ब्रह्मगुप्त (ई. ५९८/६६०) ले आर्यभट्टकै शब्दलाई लिएर प्रत्याक्रमण गरे– प्राणनैति कलां भूर्यदि तर्हि कुतो वज्रेत् कमध्वानम् ? (ब्रह्मसिद्धान्त, अध्याय ११) अर्थात् यदि आर्यभट्टको कथन मानियो भने पृथ्वी एक ‘प्राण’ मा एक कलामा हिँड्छ भने उनले बताऊन् कि पृथ्वी कुन बाटो भएर कहाँ जान्छ ?
पृथ्वी अचल छ भन्ने वेद वाक्य झुटो नहोस् भनी त्यसपछिका दिनमा थुप्रै पण्डितहरुले आर्य भट्टलाई तारो हान्ने काम गरे । वराहमिहिर (लगभग ई. ६००, पञ्चसिद्धांतिका १३/६–७), लल्लाचार्य (सातौं–आठौं शताब्दी, शिष्यधीवद्धितंत्र ४२÷४३), भास्कराचार्य (ई. १११४ देखि १४००, सिद्धान्तशिरोमणि, गोलाध्याय ५) आदि यसका प्रमुख हुन् ।
त्यसपछि खगोलशास्त्रलाई फलित ज्योतिषमा ढाल्ने भरमग्दुर प्रयत्न सुरु भयो । यसैक्रममा अत्रिसंहिता (३८५–३८७), महाभारत, अनुशासनपर्व (९०/११–१२), मनुस्मृति (३/१६२, १६७), निर्णयसिन्धु (परिच्छेद ३), धर्मसिन्धु (परिच्छेद ३) मा उल्लेखित श्लोकहरु खगोलशास्त्रलाई ज्योतिषशास्त्रमा ढाल्ने प्रयत्नस्वरुप रचना गरिएका हुन् ।
हुन त जुनबेला पृथ्वीलाई अचला मानिन्थ्यो, त्यसबेला निर्दिष्ट गरिएका ज्योतिषीय कुरामा केही थपघट गरिए होला । परिमार्जनसहित जबरजस्ती विज्ञान शब्द जोडेर लेप लगाउने प्रयत्न गरिएको पनि छ । यदाकदा कुनै ज्योतिषले औंला भाँचेर, कागजमा कोरेर, ग्रह–नक्षत्र हेरेर वा अरु किसिमका चटक गरेर गरिएको भविष्यवाणी काकतातीबस् मिलेको पनि हुन सक्छ । तर, २१ औं शताब्दीमा आइपुग्दा ज्योतिष एकातिर, विज्ञान अर्कातिर भएको अवस्था छ । ज्योतिषशास्त्र एक झुटको पुलिन्दा साबित भएको छ र यो केही व्यक्तिको उदरपूर्तिको साधन मात्र बनेको छ । यसलाई विज्ञान भनिए पनि वास्तवमा यो कुनै विज्ञान होइन । अझै पनि ग्रहनक्षत्रको प्रभाव र त्यसको दोषको निवारणहेतु दानदक्षिणा गर्नु फगत एक वेवकुफी सिवाय केही होइन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
हिन्द–प्रशान्तमा नेपाललाई फसाउने अमेरिकी दाउ
जसको सुन्दरताको व्यापक चर्चा छ (हुेर्नुहोस् १४ तस्वीर)
आइतबार राति रघुगङ्गा नदीमा पानीको सतह बढेर गलेश्वरतर्फ कटान गर्न थालेपछि पक्की पुल...
CPN in Deadlock
If the unification was based on thought and vision, there should not be seen such...
दोस्रो बजारबाट लाभ लिन मोफसलका लगानीकर्ता उत्साहित हुँदै
पूँजी बजारमा प्रवेश गरेका नयाँ युवा लगानीकर्ताले बजारको रणनीति, प्रवृत्तिबारे जानकारी...